घनचक्कर: भुल्भुलैया र भविस्यवाणी – Stories of Sandeept
How I came up with “I am the Devil!”
घनचक्कर: भुल्भुलैया र भविस्यवाणी
On February 26, 2021 By sandeept252In नेपाली, Blogging, Nepali, Review
“घनचक्कर” उपन्यास विशाल मिलन केन्द्र, चण्डोलले आयोजना गरेको एउटा प्रतियोगितामा पुरस्कारका रूपमा पाएको थिएँ । पन्ध्र वर्षको उमेर, उपन्यास पढ्ने तीव्र हुटहुटी ! नयाँ किताब समाएपछि बिहानदेखि साँझसम्म नबिसाई पढिसकेको थिएँ । सकिँदासम्म उपन्यासको ‘म’ पात्र सँगसँगै आफू पनि पागल त भइनँ जस्तो लागेको थियो । उपन्यासका राजनीतिक विषय केही बुझे पनि गहिराईमा चाहिँ पुग्न सकेको थिइनँ ।
त्यस यता एसएलसी, बाह्र र ब्याचलर पास गरिसकेपछि “घनचक्कर” पढेको थिएँ । प्रत्येक चोटि नयाँ अनुभव भएको थियो । नयाँ रहस्य खुलेका थिए । देशका घनचक्करहरू अलि बढी बुझ्दै गएर होला ।
मास्टर्स पढ्न कीर्तिपुर भर्ना भएदेखि नै “घनचक्कर” फेरि पढ्ने अनि समीक्षा लेख्ने इच्छा थियो । दरबारमार्ग, शहीदगेट, कालीमाटी, बल्खु हुँदै कीर्तिपुर पुग्दा कयौंपटक उपन्यासका दृश्यहरू आँखामा नाच्थे । बाटामा पुलिसहरू देख्दा घनचक्करको ‘म’ पात्र जस्तै कति पटक झस्केको छु । विश्वविद्यालय र देशको राजनीतिका भुलभुलैयामा रुमल्लिएको अनुभव गरेको छु । त्यसैले होला पढ्ने इच्छा भए पनि यो उपन्यास पढ्न भने डर लाग्थ्यो ।
यसपालि “घनचक्कर”पढ्दा केही भविष्यवाणीलाई ध्यान दिएँ । टावरहरूको पतन र उत्थानको प्रसङ्ग पहिले पनि याद गरेको हो । सत्तामा रहनेले टावरको निर्माणलाई अतिशय महत्त्व दिएको भएर त होला पहाडका टाकुरा र तराईका फाँटमा भ्यू टावर बनाउने ट्रेन्ड चलेको, नयाँ बनेको धरहरालाई ऐतिहासिक भीमसेन स्तम्भ नै पुनःनिर्माण गरेझैं प्रचार भएको ।
टावरहरू जबजब निरङ्कुशताका प्रतीक बनेका छन् तबतब कोही नायक जन्मिएको छ ती टावर ढाल्न । तथापि ती नायक कतै गुमनाम भएका छन् या त प्याजका डल्लामा परिणत भएका छ्न् । यिनमा मानवीय संवेदना नै छैन । आशा गरेका नेताहरूले निराश बनाएका छन् । निरङ्कुशतन्त्रको विरोध गर्नेहरू आफैं निरङ्कुश बनेका छन्, गुच्चा खेलेझैं राजनीति गरेका छन्, शक्ति संघर्षको घनचक्करमा नराम्ररी फसेका छन्, जनतालाई भ्रमको जालोमा फसाएका छन् । यस्तो संघर्षको बीचमा हर कोही धेरथोर पागल भएको छैन र ?
यस बाहेक आफ्नो जीवीकाका लागि गर्नुपर्ने दु:ख, काम र आरामका विरोधाभासमा परेर पनि मानिस घनचक्करमा परेको छ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका आन्दोलन, आन्दोलनका उद्देश्य विपरितका गतिविधि, निरङ्कुशता अनि फेरि प्रजातन्त्रका लागि हुने संघर्ष एउटा यस्तो चक्कर हो जसबाट उम्कन प्रत्येक नागरिक प्रत्येक पल सचेत हुन जरुरी छ । घनचक्करसँग जुध्नु नै यसबाट उम्कने मुख्य उपाय हो भनेर आशावादी विचारमा उपन्यास सकिएको छ ।
यद्यपि देशमा शक्ति संघर्षका घनचक्कर चलिरहेकै छ । सञ्जीव उप्रेती सर उपन्यासको म पात्रझैं आशावादी भएर लोकतन्त्र र निरन्तर पक्षमा उभिनुभएको छ । मलाई नेपाली राजनीति बुझ्न सहयोग गरेको “घनचक्कर” आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, यसमा भएका भविस्यवाणी असत्य भइदिए ! तर शक्ति संघर्ष मानवीय गुण नै हो । त्यसै यो घनचक्कर कहाँ अन्त्य हुन्छ र ?
घनचक्करपुस्तक समीक्षाBook ReviewDemocracyGhanachakkarNepaliPolitics
Targets of Bullying and Social Anxiety
सोनाम वाङ्चुकको अन्तर्वार्ताले सिकाएका केही कुरा
dancinglightofgrace on On Not Being Able to Writ…
sandeept252 on On Not Being Able to Writ…
dancinglightofgrace on के नेपालीको दलीय सोच तोडिएला…
sandeept252 on के नेपालीको दलीय सोच तोडिएला…
My Short Stories on Reedsy
Older Posts Select Month June 2022 (2) March 2022 (2) February 2022 (2) January 2022 (5) November 2021 (2) September 2021 (3) August 2021 (1) July 2021 (1) April 2021 (1) February 2021 (1) January 2021 (6) November 2020 (2) August 2020 (3) July 2020 (2) May 2020 (1) April 2020 (1) March 2020 (4) February 2020 (1) January 2020 (1) December 2019 (1) November 2019 (1) September 2019 (1) August 2019 (1) July 2019 (1) June 2019 (1) April 2019 (3) January 2019 (2) December 2018 (1) November 2018 (5) October 2018 (3) September 2018 (1) August 2018 (3) July 2018 (2) June 2018 (1) May 2018 (3) April 2018 (5) March 2018 (1) February 2018 (1) January 2018 (3) December 2017 (3) November 2017 (2) October 2017 (1) September 2017 (7) August 2017 (7) July 2017 (1) June 2017 (3) May 2017 (2) April 2017 (3) March 2017 (3) February 2017 (3) January 2017 (7) December 2016 (4) November 2016 (5) October 2016 (5) September 2016 (14) August 2016 (9) July 2016 (9) June 2016 (9) May 2016 (5) April 2016 (9) March 2016 (3) February 2016 (6) January 2016 (17) December 2015 (13) November 2015 (2) October 2015 (6) September 2015 (14) August 2015 (20) July 2015 (5) June 2015 (1) August 2014 (1) July 2014 (1) June 2014 (1) May 2014 (1)
Categories Select Category Awards (3) नेपाली (34) Blogging (170) Blogging 101 (4) Book Review (14) Children’s Day (1) climate change (1) Economy (3) essay (12) Evolution (5) Family (13) Game (2) Gaming (2) Genetics (2) Geology (7) Gratitude (8) Happiness (18) Health (2) History (6) Humanity (25) Humans and Humanity (77) humour (2) Insects (1) Inspirational (16) Life (12) Literature (6) Love (23) Monthly Feature (16) Movies (14) Music (4) Musings (4) Nature (9) Nepal (72) Nepali (71) Nepali Poem (16) Personal (2) Pet (1) Philosophical (13) Poetry (24) Politics (13) Public Health (2) Public Interest (16) Reasoning (14) Review (15) Satire (4) science (21) Science And Society (20) Similarities and Differences (2) Sports (2) Football (1) Story (24) technology (1) Tianjin Explosion (1) Travel (6) Uncategorized (27) Walk Free (1) Women (3) Words (12) Writing (30)